छोरा पाउने संघर्षमा आफैलाई बिर्सिएको एक जीवन
बुधबार, कात्तिक ३, २०७८ ०६:३६:०४
सबै पीडालाई कत्ति बोध नगरी गिज्याइरहेको लाचार पितृसत्तात्मक संकिर्ण सोच कहिले ठीक होला ?
शुक्रबार, साउन २२, २०७८ कखरा संवाददाता
डा. राजकुमार भुजेल
मिति २०७८ साल साउन ३ गते, समय अन्दाजी बिहानको ११ः३० बजे, स्थान राप्ती समाज अस्पताल (अस्थायी ननकोभिड अस्पताल),रुकुम (पश्चिम) । म सधै झैँ ओपिडिमा बिरामीका समस्याहरु सुन्दै आफ्नो ज्ञानले भ्याएसम्मको चेक–जाँच, परामर्श तथा उपचारकै क्रममा थिएँ । उहाँ सायद पन्ध्रौँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यस दिनको । उमेर ३५ वर्ष, समस्याहरुः कमजोरी हुने, छिटै थकान महसुस हुने, खान मन नलाग्ने, निद्रा नपर्ने, टाउको दुख्ने लगायत यावत् समस्याहरु । यति भन्दै गर्दा मैले उहाँको भाइटल हेरिसकेको थिएँ । चेकजाँच गर्दा उहाँ Clinically Anaemic रक्तअल्पता भएको अवस्था)मा हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँ अझै पनि आफ्नो खास समस्या नभनेर आफू अस्पताल आउनुपरेको कारण अन्य समस्याहरु भन्दै टार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो वा अझ भनौँ भन्न अफ्ट्यारो महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले हजुरको रगत, पिसाबको जाँच सँगै भिडियो एक्सरे पनि गर्नुपर्छ भनेपछि बजार नजिकैको मेडिकलमा गरेको भिडियो एक्सरेको कागज देखाउनुभयो । जसमा प्रिन्टिङ पेपरमा Non–relevant organ को Scan थियो र अन्य केही लेखिएको थिएन । अनि मैले पनि Scan कोही Non–doctor/Non–medical ले गरे भन्ने अनुमान गरेँ । त्यसपछि उहाँले भन्नुभो, डा.साब मेरो गर्भ बसेको थियो, साँढे ४ महिना जतिको थियो, बुटवलमा चेक गर्दा छोरी छ भन्यो, हामीले फेरि पनि नराख्ने निर्णय गर्यौँ, त्यहाँबाट आौषधि दिनुभयो, बच्चा त खस्यो तर रगत बग्न त रोकिएकै छैन आज ११ दिन भयो ।
अनि मैले सोधेँ,“हजुरको कतिऔँ गर्भ थियो यो ?”
उहाँले भन्नुभयो,“आठ भयो क्यारे डा.साब ।”
मैले फेरि सोधेँ, “घरमा कति जना बच्चा छन् तपाईंका ?”
उहाँले भन्नुभयो, “चारवटी छोरी छन्, यो भन्दा अघि यस्तै ३÷४ महिनाको ३ वटा खेर फालेको छोरी भएर ।”
मैले फेरि पनि सोधेँ, “हामी छोरा भएर केही गर्न सकेका छैनौँ, १२ वर्ष भो घर छोडेको, बिरामी पर्दा तातोपानी दिन नजिकै अस्पताल लैजान सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, छोरा नै किन चाहियो ?”
उहाँले भन्नुभयो ,“क्यार्दान् र सर बड्डाले माने पो, मलाई त यतिखालाको जीवन खेर फाल्न रहर हुँदो हो त ?”
त्यसपछि सम्झिएँ, पितृसत्तात्मक हाम्रो निरीह समाज,आफ्नो इच्छाको लागि लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने गराउने हाम्रै Fraternity का वरिष्ठ डा.साबहरु, अनि अरु अरु ।त्यसपछि त्यहाँ हुने जाँचहरु पठाएँ, आफुले जानेसम्मको भिडियो एक्सरे गरेँ अझै पनि RPOC(सालका टुक्राहरु, गर्भका केही अंशहरु) हरु देखिन्थे । रगतको रिपोर्टमा Hb–6(अत्यधिक रक्तअल्पता) संक्रमण भएको देखियो । Septic Abortion Provisional diagnosis राखेर2Pint Fresh whole blood नेपाल आर्मीको सहयोगबाट, Antibiotics, supportive medications र चार दिनको अस्पताल बसाइपछि सबै कुरा Stable भएपछि पुनः Post abortion care पछि बिरामी अलि तग्रिनुभयो । बिरामी सँगै हाम्रो डाक्टर, अस्पताल टिमले मोलेको जोखिमले बिरामी त ठिक हुनु भयो, खुसी लाग्यो ।
तर छोराको चाहनामा थिलथिल बनेको कैयौँ आमाहरुको शरीर, त्यो सबै पीडालाई कत्ति बोध नगरी गिज्याइरहेको लाचार पितृसत्तात्मक सङकिर्ण सोच कहिले ठीक होला ?
डा. भुजेल झण्डै अढाई वर्ष जिल्ला अस्पताल रुकुममा काम गरी भर्खर जानुभएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८, १२:३४:००